Labo Ronaldo oo ku midoobaya gegada Bernabeu….(Ronaldo wayne oo dib ugu soo laabtay Real Madrid) – Gool FM
Labo Ronaldo oo ku midoobaya gegada Bernabeu….(Ronaldo wayne oo dib ugu soo laabtay Real Madrid)
Byare August 25, 2016
(Madrid) 25 Agoosto 2016. Waxaa soo rogaal celiyay rugcadaagii hore reer Brazil ee kooxda Real Madrid Ronaldo Luís Nazário de Lima oo door cusub ka qaban doona kooxda ka arrimisa Bernabeu.
Ronaldo ayaa u shaqeyn doona sida Ambaasadoorka caalamiga ah ee Real Madrid, wuxuu sidoo kal u shaqeyn doonaa sida la taliyaha madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez, kaa oo markii hore keenay kooxda sanadkii 2002.
Shaqada cusub uu Ronaldo u qaban doono Los Blancos ayaa bilaaban doonta bisha September sida ay sheegeyso jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain.
Sanado badan ayaa lala xiriirinayay inuu dib ugu soo laabto Benrabeu laakiin wuxuu gacanta kula jiray oo uu ku mashquulsanaa dhacdooyin badan oo kubbada cagta ah sida koobkii adduunka ee 2014 ee lagu marti galiyay dalkiisa hooyo ee Brazil.
Waxaa loo doortay laacibkii ugu fiicnaa adduunka sanadihii 1996, 1997 iyo 2002 wuxuuna Real Madrid u dhaliyay 104-gool 177-kulan uu u saftay.
WARBIXIN: Min Benteke illaa Pogba: 11 Ciyaaryahan oo aan u wanaagsanayn sida walaalahood oo kale… + SAWIRRO
RASMI: Barcelona oo dhammeystirtay saxiixeeda goolhaye Jasper Cillessen